Ulwazi lwaBakhweli be-Iberia ngeNtsebenziswano entsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Ulwazi lwaBakhweli be-Iberia ngeNtsebenziswano entsha
Airlines • uhambo ngomoya • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Iindaba zeWired Travel
Abasasazi beshishini lokuhamba banokuxhuma ukusuka namhlanje ukuya e-Iberia nge-Kyte API kunye nokufikelela kwiindleko zomoya kunye neenkonzo ezincedisayo.
Iberia kunye Kyte -Inkampani yeteknoloji yecandelo le-aviation enikezela nge-API yeleyibhile emhlophe kwiinqwelomoya njenge-SaaS - namhlanje ibhengeze ukusayinwa kwesivumelwano.
I-Kyte API yinto yanamhlanje kwaye kulula ukuyisebenzisa isixhobo esivumela abahambisi beshishini lokuhamba ukuba badibanise ngokuthe ngqo kuyo yonke i-inventory ye-airline yaseSpain kunye nokufikelela kwiimveliso zayo ngendlela eguquguqukayo, elula kwaye esebenzayo.
Esi sivumelwano siyinxalenye yenjongo yeKyte yokubonelela ngetekhnoloji yokuthengisa ephezulu kwijelo lokuthengisa kwiinkampani zeenqwelomoya kwaye, kwangaxeshanye, bancede baguqule indlela abalungisa ngayo amaxabiso kwaye basasaze iimveliso zabo kubathengi, bobabini ngokuthe ngqo kunye no. imijelo engathanga ngqo.
UAlice Ferrari, iCEO yeKyte ugqabaza: “Siyazingca ngokuba ngomnye wababoneleli bokuqala be-API kwinkokeli yenqwelomoya efana ne-Iberia.
“Injongo yethu kukunceda iinkampani zeenqwelo moya ukuba zifezekise umbono wazo wokuphucula onke amava ogcino. Sinikezela kwiinqwelomoya ezintsha kwaye kulula ukuzisebenzisa izixhobo eziyilelwe ukuhlangabezana nokulindelweyo ngoku kwiintengiso ze-intanethi. Konke oku ngaphandle kokubeka esichengeni inqanaba lobuchwephesha obuyimfuneko ekulawuleni ukuntsonkotha kunye neemfuno zokhuseleko ezifunwa lushishino lwezophapho.
"Injongo yethu kukuphuhlisa ubudlelwane obuqinileyo kunye nexesha elide kunye ne-Iberia kwaye sibone indlela abasebenzisa ngayo amathuba amakhulu anikezelwa yi-NDC."
UMiguel Henales, uMlawuli woShishino lweDijithali wase-Iberia, wongeza: "Ubhubhani Izithintelo ziye zandisa ulindelo lwabathengi kunye nokukhawuleza ukuthambekela kwedijithali. Enkosi kubuchwephesha be-NDC sinokwanelisa ngakumbi iimfuno zabathengi kwaye sibanike inkonzo egqibeleleyo ngexesha logcino kunye nokulawula uhambo lwabo.
"Injongo yethu yokugqibela kukutsala amaqabane amaninzi kwijelo lethu le-NDC, ebonelela ngonxibelelwano lwale mihla olufana neKyte API evumela ukuhanjiswa okungcono kwemveliso yethu."